Chii chinorehwa nechirairo ▷ ➡️ Ziva Pamhepo ▷ ➡️
Ko chirairo zvinorevei. Apo vanhu vanofunga nezvechirairo, vanofungidzira boka revana mukati mechechi richigadzirira kugamuchira kutsaurwa nechingwa. Zvisinei, zvakakosha ziva chikonzero nei chiitiko ichi chichiitwa mukati memakereke edu.
Chirairo chiito icho inomiririra nguva apo Jesu akagovera chingwa cheKudya Kwemanheru Kwokupedzisira. Iyo yaakagovana nevadzidzi vake asati arovererwa. Zviri a nguva yekurangarira zvakare kuti Akakufira. Inguva yekufungisisa nekutenda chibayiro Chake nekuisa zvinhu mugwara.
Kana tangoziva zvazvinonyatsoreva, zvakakosha kuti tizive kuti muzvikamu zvipi zvebhaibheri chiitiko ichi chinotaurwa nezvacho uye kuti chinomiririrei.
1 Mamwe mavhesi eBhaibheri anotaura nezveKudya kwaShe Kwemanheru
2 Ndezvipi zviratidzo zveKudya kwaShe Kwemanheru?
3 Ndiani angadya kudya kwemanheru?
Mamwe mavhesi eBhaibheri anotaura nezveKudya kwaShe Kwemanheru
Akatora chingwa, akaonga, akachimedura ndokuchipa kuvadzidzi, achiti: ‘Uyu ndiwo muviri wangu wakapiwa nokuda kwenyu; itai izvi muchindirangarira. Nenzira yakafanana, pashure pezvokudya, akatora mukombe ndokuti: “Mukombe uyu isungano itsva muropa rangu, rinodururirwa imi. ( Ruka 22:19-20 ).
“Nokuti nguva dzose kana muchidya chingwa ichi nokunwa mukombe uyu, munoparidza rufu chaJehovha kusvikira auya” ( 1 VaKorinte 11:26 ).
“Ndiri pano ndiri pamusiwo ndinogogodza. Kana munhu akanzwa inzwi rangu, akazarura mukova, ndichapinda ndigodya naye, naiye neni.” ( Zvakazarurwa 3:20 ).
“Jesu akati kwavari: ‘Chokwadi ndinoti kwamuri: Kana musingadyi nyama yoMwanakomana womunhu nokunwa ropa rake, hamungavi noupenyu mamuri. Ani naani anodya nyama yangu nokunwa ropa rangu ane upenyu husingaperi, uye ini ndichamumutsa pazuva rokupedzisira. Nokuti nyama yangu ndicho chokudya chaicho, uye ropa rangu ndicho chokunwa chaicho. Ani naani anodya nyama yangu nokunwa ropa rangu anogara mandiri, neni maari. Sezvo Baba vapenyu vakandituma uye ndinorarama murudo rwaBaba, saizvozvo uyo anondidya achandiraramirawo. (Johani 6:53-57).
«Ndini chingwa chipenyu chakaburuka kubva kudenga. Kana munhu akadya chingwa ichi, achararama nokusingaperi. Chingwa ichi ndicho chokudya changu, chandichapa nokuda kwoupenyu hwenyika. ( Johani 6:51 ).
“Vanhu vachabva kumabvazuva nokumavirira, nokumusoro nezasi, uye vachagara patafura muumambo hwaMwari. Zvirokwazvo, varipo vekupedzisira vachava vokutanga novokutanga vachava vokupedzisira” ( Ruka 13:29-30 ).
“Naizvozvo ani naani anodya chingwa nokunwa mukombe waShe nomutoo usina kufanira achatadzira muviri neropa raShe. Mumwe nomumwe wenyu ngaazviongorore uye ipapo idya chingwa nokunwa pamukombe. Nokuti ani naani anodya nokunwa asingacherechedzi muviri waShe anozvidyira nokuzvinwira kutongwa kwake. Ndokusaka vazhinji pakati penyu vasina simba uye vachirwara, uye vazhinji vatovate. ( 1 VaKorinte 11:27-30 ).
“Pamunoungana, hachisi chirariro chaShe chamunodya, nokuti mumwe nomumwe anodya zvake asingamiriri vamwe. Saka mumwe paanenge aine nzara, mumwe anodhakwa. Ko, hamuna imba yokudyira nokumwa here? Kana kuti vanozvidza kereke yaMwari uye vachininipisa avo vasina chinhu? Ndichati kudii? Kwete " ( 1 VaKorinte 11:20-22 ).
“Hamugoni kunwa pamukombe waShe kana pamukombe wamadhimoni; havangadyi patafura yaShe nepatafura yamadhimoni” ( 1 VaKorinte 10:21 ).
Naizvozvo, hama dzangu, kana muchiungana kuti mudye, miriranai. Kana mumwe aine nzara, idya kumba kwake, kuti kana vachiungana pamwe chete kurege kuva nemhosva. Kune vamwe, kana ndaenda, ndinokupa mirayiridzo " ( 1 VaKorinde 11:33-34 ).
Ndezvipi zviratidzo zveKudya kwaShe Kwemanheru?
Zviratidzo zveKudya kwaShe Kwemanheru ndizvo chingwa newaini. Jesu akatora zvinhu zviri nyore uye zviri nyore kuwana kuti arege kuita kuti Kudya Kwemanheru kunyanye kuomesera. Chingwa newaini hazvitombove nyama neropa raJesu. zvinongova zviratidzo. Chinhu chakakosha hachisi chikafu pachacho, asi icho inomiririra.
Chingwa: Jesu akati chingwa inofananidzira muviri wake, uyo wakaputsirwa isu. Pamuchinjikwa akarwadziwa zvikuru, zvose nerudo kwatiri. Akatambura kurwadziwa kwatinofanira, panzvimbo yedu.
«Akatora chingwa, akavonga, akachimedura, ndokuvapa, achiti: Uyu muviri wangu, unopirwa imi; itai izvi muchindirangarira. Nenzira imwecheteyo, shure kwekurayira, akatora mukombe, achiti: Mukombe uyu isungano itsva muropa rangu, rinoteurirwa imi.. Ruka 22:19-20
Waini: inomiririra sungano itsva pakati pako naMwari. MuTesitamende yekare, zvibvumirano zvainamwa nechibairo, apo ropa remhuka raideurwa. Ropa raJesu, izvo zvaive zvese akateuka paakafa, panguva imwe cheteyo akaripira zvitadzo zvedu uye akasimbisa a Chibvumirano chitsva pakati pedu naMwari.
Nenzira imwecheteyo, shure kwekurayira, akatora mukombe, achiti: Mukombe uyu isungano itsva muropa rangu, rinoteurirwa imi.. Ruka 22:20
Paunodya chingwa nekunwa waini, unoratidza nyika izvozvo Kristu wakakufira. Mupiro waJesu wakabhadhara mutengo wezvitadzo zvako uye zvino Anogara mukati mako. Nenzira yokufananidzira, ndizvo sokunge wakafira pamuchinjikwa uye wakamuka pamwe chete naJesu.
«Naizvozvo zvino, nguva dzose kana muchidya chingwa ichi nekumwa mukombe uyu, munoparidza rufu rwaIshe kusvikira asvika.".
Kune rumwe rutivi, Jesu haana kupa mirayiridzo yakananga parudzi rwechingwa kana waini yekushandisa, kana ukuru hwemigove, kana nzira yakanaka yekugovera uye kudya chikafu, kana kuwanda kwachinofanira kutorwa. Zvese izvi ndezvechipiri uye zvinoenderana nekereke yega yega kuti inozviita sei. The most chinokosha ndicho chinomiririrwa neKudya Kwemanheru, kwete kuti chinotorwa sei.
Ndiani angadya kudya kwemanheru?
Kana wakagamuchira Jesu saIshe neMuponesi wako, unogona kuenda kuchirairo. Zvakakosha kuti unzwisise zvawakaitirwa naJesu, Kudya kwemanheru ndekweavo vakaponeswa. Kunwa doro hakuna kana usingatendi kana kugamuchira Jesu, nekuti chirairo ndechekuratidza kuti watogamuchira Jesu. Kudya chirairo pasina kutenda kusaremekedza Jesu, Uyezve, Bhaibheri rinoti hazvina kururama.
Kubva Ziva.online Tinovimba kuti chinyorwa ichi chave chinobatsira kwauri. Kana iwe zvino unoda kuziva yaive sei kereke yekutangaYakarongwa sei uye kuti yakagadziridzwa sei, ramba uchitsvaga webhusaiti yedu.
Ndezvipi zvisimbiso zvinomwe zveapocalypse